Tontolo Arabo: Tohina Tamin’ny Famonoana Ny Ambasadaoro Amerikana Tao Benghazi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2012 0:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Svenska, Français, বাংলা, Deutsch, Filipino, عربي, Ελληνικά, македонски, 繁體中文, 简体中文, Magyar, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Revolisiona ao Libya 2011.
Mitatitra ireo vaovao samihafa fa nohodidinin'ireo mpanao hetsi-panoherana ny Kaonsily, ireo tezitra noho ilay sarimihetsika manivaiva ny Mpaminany Mohammed, novokarin'ny safiotra iray Amerikana-Israely mpamokatra sarimihetsika. Tany Cairo, nisy hetsika iray mitovy amin'izay, izay nihanihan'ireo mpanao hetsi-panoherana ny tambohon'ny Masoivohon'i Etazonia, nanongotan-dry zareo n saina Amerikana, ary nanoloany izany tamin'ny sorabaventin'ny Islamika.
@ShababLibya: Inona izao no tena nilàna ny fanafihana ny kaonsily e ? Tsy misy afa-tsy fanimban-javatra, herisetra, & zava-doza tanteraka.
@alazzane: Tsy fandresena velively ho an'ny Mpaminany ny famonoana ny Ambasadaoro Amerikana ry ilay tsy misy saina ireto! Vao mainka aza manamafy ny fitsaratsaram-poana tsy mety afafin'ireo mpamokatra ilay sarimihetsika. Mahamenatra !
@NasrAldbea: Azoko antoka fa tsy fantatr'ireo izay nandoro sy nidaroka balafomanga akory izay mikasika ilay sarimihetsika, na kely aza. Rehefa nahita izay mitranga tany Ejipta aho, dia efa niahiahy fa hisy tsy misy hafa amin'izany koa hitranga ao Libya.
@Khalil_alagha: Nisy namono tao Benghazzi ny Ambasadaoro Amerikana izay mpanohana matanjaka ny revolisiona Libiana sy nitia ny tontolo Arabo. Ny valim-pitiany dia ny famonoana azy. Firenena voaozona isika.
@Fahad: Tsy misy faran'izay atahorana noho ny olona iray atosiky ny fahresen-dahatra ara-pionana laroin'ny tsy fahalalàna. Ho verin'ny Revolisiona Libiana ny tena maha-izy azy raha tsy voasazy ireo tsy valahara namono ny Ambasadaoro Amerikana.
@AhmedEMisrata: Ny zava-nitranga halina dia henatra ho an'ny revolisiona nataontsika, ho an'ireo maritiorantsika ary ho an'ny ankamaroantsika, ompa ho an'ny fampianarana nataon'ny Mpaminany PBUH #Benghazi
@_Schehrazade_: Nisy namono ny lehilahy iray nanaanteraka ny asany tao #Libya satria nisy tsy matianina namokatra sarimihetsika tsy misy dikany ary nisy tsy ampy saina nanome lanja izany. Tohizo foana ihany ny fankahalàna.
@N_Benghazi: Ny mpaminany tsy hanaiky mihitsy hoe hisy rà tsy manan-tsn hilatsaka satria hoe nisy olona tohina noho ny sarimihetsika novokarin'olona tsy hay tsy hay tany. #libya
@KarimElDeqwi: Hisy fiantraikany goavana ny fanafihana ny Masoivoho Amerikana tao Libya ary hanova ny vokatry ny fifidianana ho amin'ny zotra tsy hanome tombony velively ny Arabo sy ny Miozolmana. Dia arahabaina izany ny fampihorohoroana izay sitrahantsika e !
@NadiaE: Tena mendrika antsika marina tokoa izay mihatra amintsika. Izao tontolo izao mihitsy no hanao tsinontsinona antsika mandra-pahaleo antsika amin'ny tsy fahalalàna sy ny ‘fondamentalisme’ iainantsika. Misy zavatra tsy mety ao amintsika ao fa tsy amin'izay resaka sarimihetsika kidaladala akory.